Baro wax walba oo ku saabsan maalinta rabshadaha - World March
Cilmi dhammaan wixii ku saabsan maalinta rabshadaha
Bogga ugu weyn » Cilmi dhammaan wixii ku saabsan maalinta rabshadaha
Dagaalku wuxuu u adeegsaday qalab si loo xalliyo khilaafyada qaarkood oo dhan taariikhda oo dhan waxay sababeen dhibaatooyin halis ah oo u dhaxeeya dhaqamada kala duwan iyo dhaqamada kala duwan. Waqtigan xaadirka ah, ururrada kala duwan waxay shaqeeyaan maalin kasta si ay kor ugu qaadaan aragtida kooxo kala duwan oo abuuraya dhacdooyin sida maalmo aan rabshad lahayn iyo maalmo isku mid ah, oo la xidhiidha mawduucaas. Sanadkiiba hal waxaan heleynaa maalmo kala duwan oo ujeedadoodu tahay in la abuuro wacyigelin ku saabsan dhibaatooyinka u baahan in la arko. Ka mid ah maalmaha la xidhiidha rabshadaha waxaad ka heli kartaa jaantusyo muhiim ah sida maalinta caalamiga ah ee rabshadaha.
Taariikhda ayaa lagu dhageeyey saldhigyada dagaallada, halganka aan la isku haleyn karin iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Empires ayaa la abuuray thanks to baabi'inta dadka, xadgudubyada xorriyadda iyo addoonsiga nolosha aadanaha. Iyada oo ku xidhan ilbaxnimo muddo taariikhi ah ku been abuurtay dhismaha maamulada kala duwan iyo dulmi, oo inkastoo marxalado badan dhaqamada qaarkood ayaa soo saartay jirkooda ka yahay horumarinta xuquuqda, waxaa had iyo jeer ahaa kooxo iyagu bannaanka ka joogay xadad sharci, sababaya ka-saarid iyo rabshad iyaga u gaar ah.
1 Maxay yihiin maalmihii rabshadihii ugu muhiimsanaa?
2 2 Oktoobar: Maalinta Caalamiga ah ee Xadgudubka
2.1 Maxay tahay maalin aan rabshad iyo nabad?
3 Nofeembar 25 ee rabshad lid ku ah dumarka
3.1 Sababta loo heysto taariikhda taariikhdan: Nofeembar 25 ee rabshad lid ku ah dumarka
3.2 Maxaad ugu dhiirigelisaa dabaaldegga maalinta 25 November rabshad?
4 Janaayo 30 oo ah maalin dugsi oo ku saabsan rabshad iyo nabad
4.1 Maxay tahay sababta ay colaadaha iyo nabadda ugu dabaaldegaan 30 bisha Janaayo dooratay dugsiyada?
5 19 Maalinta Noofembar adoon rabin rabshad xagga caruurta iyo dhalinyarada
5.1 Maalinta caalamiga ah ee rabshadaha iyo ka hortagga xadgudubka galmada iyo kadeedka
5.2 Muujiyeyaasha rabshadaha carruurta
6 Qoraalka kama dambeysta ah ee maalinta caalamiga ah ee rabshadaha ka dhanka ah colaadaha
7 Spain ayaa hogaamineysa tartanka caalamiga ah ee maalinta caalamiga ah ee colaadaha
Maxay yihiin maalmihii rabshadihii ugu muhiimsanaa?
Dhaqdhaqaaqa bulshada ee ku xiran maalinta caalamiga ah ee rabshadaha Waxaa jira dhowr. Waxaa jira maalmo badan oo ah kalasooc aan ku jirin jadwalka, diiradda saara qaybaha kala duwan ee bulshada, sida:
Maalinta ilmo aan shidaal ahayn
Maalinta 25 ee rabshadaha ka dhanka ah dumarka
Maalinta caalamiga ah ee rabshadaha, oo ku yaalla 2 bisha Oktoobar
30 ee Janaayo, Maalinta Dugsiga Dhibaatada ah ee aan ku qasbanayn inaan isku jinsiinno maalinta ilmo aan rabshad lahayn
Maalinta Caalamiga ah ee Xad-gudubka iyo Nabadda.
Waxay xitaa ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee arrinta, waxay dadaalka ay diiradda saaraan la dagaalanka rabshadaha in qaybaha kala duwan oo ay leeyihiin hadafka guud: suuragalnimada in soo afjaridda dhaqanka kasta oo rabshad ka jirta dunida, awood nabad oo dhan ay gaaraan meelaha geeska ah ee meeraha, sidaas darteed muwaadiniinta isku mid ayaa leh xuquuq iyo waajibaad isku mid ah
2 Oktoobar: Maalinta Caalamiga ah ee Xadgudubka
Maalinta caalamiga ah ee rabshadaha Oktoobar 2 waxaa lagu xusay, maadaama ay tahay waqti dabaaldega dhalashada Mahatma Gandhi. Taasna waa falsafada Gandhi waxay ku salaysan tahay isticmaalka wadahadalka xallinta khilaaf kasta.
Waxay ahayd sannaddii 15 2007 June, marka Nations Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ku dhawaaqday go'aan 61 / 271, 2 October in rabshadaha ma noqon doono maalintii la doortay. Maalintaan rabshad waxaa loo isticmaalay tixraac caalami ah oo lagu xusayo dad aad u fara badan oo naftooda u dagaallamaya noloshooda oo dhan si ay u gaaraan bulsho aad u tiro badan.
Maxay tahay maalin aan rabshad iyo nabad?
Dhaqanka ku habboon Maalinta Dhaqan-Xummadda Adduunka wuxuu diiradda u saaran yahay sidii loo horumarin lahaa xuquuqda madaniga iyo isbadalada bulshada, maxaa yeelay waxa loogu talagalay in lagu ilaaliyo nolosha aadanaha iyadoo la adeegsanaayo qalab.
Dad badan ayaa la yaabi kara maalinti aan rabshad lahayn, iyo sababta maalinlaha nabadda iyo rabshadaha loola jeedo. Taasina waa sida ay khabiiradu u leeyihiin Maalinta Caalamiga ah ee Xadgudubka, waxay gacan ka geysaneysaa abuurista wacyi galin caalami ah oo ku saabsan isticmaalka xad-dhaafka xad-dhaafka ah ee xallinta khilaafaadka ka dhexeeya wadamada iyo gudaha.
Sidaas daraaddeed maalin October 2 ah oo aan rabshado, waa fursad ay hay'adaha kala duwan si ay u maareeyaan dhacdooyinka oo muujinaya rabshadaha xad-dhaafka ah ee dunida, labadaba si toos ah iyo subliminally. Ilaa maantadan la joogo ee nacaybku sheegan si firfircoon uga qayb qaadan kartaa socod abaabulay dhamaan aduunka oo dhan, ama ay ku biiraan ururada ka shaqeeya dhismaha si ay u abuuraan maalinta nabadda iyo nacaybku iyada oo qalab is-dhexgalka iyo ixtiraam.
Sababtaan awgeed, haddii aad rabto inaad ka qayb qaadato maalinta 2 ee ku saabsan dhacdooyinka kala duwan ee ka dhacaya magaalooyinka iyo magaalooyinka, waxaa wanaagsan inaad la xiriirto urur la xiriira maalinti ah rabshad iyo nabad iyo inay bixiyaan shaqadooda.
Waxaa muhiim ah in laga warqabo taariikhda, maxaa yeelay waa wax caadi ah in la helo fikir qarsoodi ah in ay tahay maalinta caalamiga ah ee 2 ee rabshadaha, markaan waa in aan xoogga saarno, in ay tahay 2 ee Oktoobar. Taasna waa mararka qaarkood inaad ka hesho macluumaad khalad ah oo ku saabsan internetka taasoo keeni karta jahwareer.
Nofeembar 25 ee rabshad lid ku ah dumarka
Mawduucan waa mid ka mid ah kuwa ugu mihiimsan oo hadda ku jira afka adduunka oo idil. Sababta ayaa ah in rabshad diirada lagu saarayo haweenku waa mid ka mid ah iskutallaabta ka dhigaysa in ay adagtahay dhaqamada si ay ugu sii socdaan midnimo.
El 25 Maalinta Nofembar ee maalinta caalamiga ah ee ka dhanka ah rabshada dumarka, waxaa loogu talagalay in lagu dhajiyo dhammaan noocyada rabshadaha kuwaas oo lagu sameeyo kooxdan iyo in marar badan la quudiyo ama aamusnaanta.
Sababta loo heysto taariikhda taariikhdan: Nofeembar 25 ee rabshad lid ku ah dumarka
Rabshadaha ka dhanka ah haweenka waxay ku jiraan falalka iyo xaaladaha sida rabshadaha jinsiga, rabshadaha uur-jiifka, dhibaataynta, kufsiga ama sinnaanta mushaharka, iyo kuwo kale.
Xaaladaha intaas oo dhammu waxay keenaysaa in dumarka waxaa loo tixgeliyaa liita siyaabo badan marka loo eego ragga, ama waxaa la siiyay doorarka jinsiga sababtoo ah waxay yihiin haween, sida doorka daryeelaha ama nadiifiya.
Maxaad ugu dhiirigelisaa dabaaldegga maalinta 25 November rabshad?
Rabshadaha lagu aasaasay haweenka jinsiga ah waa mid ka mid ah kuwa ugu baahsan, si loola dagaalamo. Sanadkan 1993, Baaqa ku saabsan Ciribtirka Rabshadaha ka dhanka ah Dumarka waxaa soo saaray Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Oo waxaa loo tixgeliyaa in la joojiyo sheegashada Maalinta 25 ee rabshad iyo nabad waa lagama maarmaan in gabdhaha iyo dumarka labadaba (oo aasaas ahaan ka badan kala bar bulshada adduunka) ay ku noolaadaan cabsi la'aan, la'aan rabshadaha qoyska, ee jaaliyad aamin ah oo cadaalad ku dhisan.
Oo intii waa run in tan iyo markii rabshado 25 November 2017 ay bilaabeen in ay la kulmaan qaar ka mid ah horumarka ee kor u qaadista wacyiga xaalkan ilaa xuquuqda la gaaray, qaar badan oo ka fiirsada, in shirkadaha caalamiga ah aan horumar caddaalad iyo sinaan dhinaca anshaxa ah, ku saleysan qiyamka caddaalad iyo dulqaad.
Janaayo 30 oo ah maalin dugsi oo ku saabsan rabshad iyo nabad
Janaayo 30 Maalinta iskuulka ee rabshadaha iyo nabadda Xuska dhimashada Mahatma Gandhi, oo ahaa hoggaamiye qaran iyo ruuxi ah ee Hindiya, ayaa loo dabaaldegayaa. Maalintan waxaa loo dabaaldegaa sanadka 1964, laakiin ma aheyn illaa sanadka 1993 markii UN ay aqoonsatay.
El Janaayo Maalinta Caalamiga ah ee Rabshadaha 30, falal kala duwan ayaa lagu qabtaa dugsiyada si kor loogu qaado nabada adduunka. Waa wax caadi ah maalin dugsiyeedka ah ee rabshad iyo nabadgelyo si ay u qabtaan hawlaha, sida taariikhda sheekada nabadda iyo rabshadaha, ama heeso la xidhiidha nabadgelyada ayaa sidoo kale heesaya, taasina waxay ka dhalinaysaa xaalad ah in lagu noolaado dalka ama meel dunida ka mid ah.
Maxay tahay sababta ay colaadaha iyo nabadda ugu dabaaldegaan 30 bisha Janaayo dooratay dugsiyada?
Maalintan waxaa doorta xarumaha waxbarashada si ay u qabtaan waxqabadyo kala duwan kuwa yar yar. Maalmahan waxaa badanaa lagu qabtaa cunuga iyo marxaladda aasaasiga, waxaana loogu talagalay in yaryar ay yaqaanaan matalaadyo ku saabsan dhaq-dhaqaaqa rabshadaha iyo nabadda. Waxaa ka mid ah Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, hooyada Maria Maria Teresa oo ka tirsan Calcutta ama Martin Luther King.
Waxaa muhiim ah in la maalintii yar caalamiga ah ee nacaybku tan iyo carruurnimada, iyo maalin kasta in ay ku lug leeyihiin sida maalinta caalamiga ah ee ka dhanka ah 25 rabshadaha waqtiga la xidhiidha maalinta nabadda iyo nacaybku, shaqeeyaan November, ka 2 Oktoobar Oktoobar oo ah rabshad iyo nabadgelyo ama maalin dugsiyeedka rabshadaha iyo dhibaataynta.
19 Maalinta Noofembar adoon rabin rabshad xagga caruurta iyo dhalinyarada
The November 19 waa Maalinta cunug iyo dhalinyarad la'aan, waxaa loola jeedaa in la arko xadgudub loo geystay kuwa ugu yar. Waxay ahayd sannadka 2000 markaan maanta loo qoondeeyey si aan u dhisno tallaabooyin deg-deg ah oo wax ku ool ah. Intaa waxaa dheer, November 20 waxaa lagu dabaaldegaa maalinta Iskuulka Carruurta.
Maalintan oo aan rabshad lahayn ee loogu talagalay carruurta waxaa loo adeegsadaa in ay kor u qaadaan wacyiga ku saabsan waxa ay yihiin farsamooyinka ugu caamsan ee kufsiga ilmaha iyo qalabka ay isticmaali karaan si kor loogu qaado gambaleelka digniinta ee dadka qaangaadhka ah ee ku wareegsan.
Maalinta caalamiga ah ee rabshadaha iyo ka hortagga xadgudubka galmada iyo kadeedka
Ku xadgudubka iyo dhiig-miirashada carruurta iyo dhalinyarada waa dhibaato ku saabsan dhammaan wadamada adduunka. Taasna waa in noocani xadgudubku aanu kala saarin jinsiyadda, waddanka, dhaqanka ama xaaladda bulshada.
ka kiisaska xadgudubka iyo rabshadaha ee caruurta yar yar waxay sameysteen boqolaal urur iyo nidaam dowladeed oo ay bilaabaan in ay qaataan tallaabooyin, ayna hirgeliyaan nidaamyada waxbarashada iyo qeylo-dhaan, si kiisaskan loo aqoonsado oo loo dhisi karo nidaamyo ficil ah dhammaan dhinacyada: qoysaska, xarunta waxbarashada sida goobaha lagu nasto .
Muujiyeyaasha rabshadaha carruurta
Khabiiradu waxay sameysteen liis ah tilmaamayaasha ugu badan ee laga heli karo carruurta iyo dhallinyarada marka ay la kulmaan ama la tacaalayaan:
Calaamadaha muuqaalka: dhaawaca meelo dareen ah, sida dhiigbax, barar ama caabuq.
Calaamadaha maskaxda: cabsida, cabsida, riyooyinka soo noqnoqda, hurdo la'aan. Habdhaqan xumo ama dib-u-qaadis xirfadaha hore loo soo iibsaday.
Dabeecadaha hore ee galmada, qoysaska iyo kacdoonka dugsiga, waxqabadka tacliinta liita.
Tilmaamahan waxaa loogu talagalay in xubnaha qoyska, saaxiibada ama barayaashu ay ku ogaan karaan astaamaha ugu yar ee xadgudubka iyaga oo aan hadal u sheegin.
Qoraalka kama dambeysta ah ee maalinta caalamiga ah ee rabshadaha ka dhanka ah colaadaha
Nasiib darro, waxa ay u muuqataa in waqtiga oo dhan waa maalinta caalamiga ah ee rabshadaha, maxaa yeelay, dhammaan isku dhacyada ka jira dunida oo dhan, iyo dhammaan xadgudubyada in bulshooyinka oo dhan, haddii ay waxaa loo tixgeliyaa ilbaxnimada ama ma.
Iyada oo ku xidhan dhaqanka waddan kasta iyo horumarka ama dib udhaca xuquuqda ay leedahay, noocyada kala duwan ee rabshadaha waa la arki karaa. Dad badan ayaa laga yaabaa in ay u malaynayaan in dalalka horumaray aysan u baahnayn in la dabaaldego maalin caalami ah oo ka dhan ah rabshadaha, sababtoo ah waxay u maleynayaan in aysan mar dambe jirin ama in yar ama u qalmaan.
Laakiin nasiib daro waa ka soo horjeeda, rabshadu waa qayb ka mid ah bani'aadamnimada, iyo in la tirtiro marka hore waa lagama maarmaan tahay in kor loo qaado wacyigelinta jiritaankeeda, oo ka muuqda xaaladaha ay u muuqdaan iftiinka, iyo waxa loo arko inay yihiin rabshad.
Spain ayaa hogaamineysa tartanka caalamiga ah ee maalinta caalamiga ah ee colaadaha
Spain waa dal loo aqoonsaday dunida ugu horreysa ee boqortooyadii baarlamaanka ee dimoqraadiga ah, iyada oo dastuuri ah in la ilaaliyo oo bixiyo xuquuqda muwaadiniinta oo dhan.
Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in taariikhda ugu dambeysay ee dalkan ay jiraan xaalado ah rabshad xad-dhaaf ah, labaduba waa kuwo cad oo qarsoodi ah. Dagaalka qoyska (maalintaan waa 25 November rabshad) ayaa ah mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee keenaya bulshadan.
Waxa uu sidoo kale ku noolaa marxaladaha taas oo argagixisada hanjabay nolol maalmeedka dadka deggan. Waxaa ka mid ah falalka dibad walaac badnaan ayaa si toos arki rabshadaha la 1 October ka dhacay Catalonia, sababta oo ah afti la keenin ciidamada ammaanka, kuwaas oo xoog ku weeraray muwaadiniinta. Sababtan awgeed u Maalinta Aduunka ee Xiisadda 2017 Waxay ahayd mid muhiim ah.
Haddii aad u aragto in Spain ay tahay mid ka mid ah bulshooyinka ugu ilbaxnimada, iyo inkastoo this, weerar badan oo ku saabsan xuquuqda iyo balanqaad ah oo ay shakhsiyaad waxaa ka go'an, waa ay fududahay in la damacsan yahay in ka dhacaya dalalka kale oo leh heerar hoose ama dimuqraadiyadda lahayn ama marxad dagaal.
Sababahan oo dhan waxaa jira ururo kor u qaadaya dagaalka lagula jiro xuquuqda dadka, sida xaaladdu tahay World March ee Nabadgalyada iyo Dagaal-la'aanta, oo sannadka sannadka ka shaqeeya, caalamku si kor loogu qaado wacyi-gelinta muwaadiniinta iyo dawladooda oo ku saabsan muhiimada ayan isticmaalin rabshadaha.